परिवर्तनका पक्षमा साझा आवाज ! – Chitwan Post
इतिहासलाई हेर्दा परिवर्तनमा जटिलता भएकाले प्रजातन्त्रको प्राप्तिपछि पनि पञ्चायती व्यवस्थाले हैकम जमायो । आज पनि परिवर्तनमा भौतिक व्यवस्थापन र मनोवैज्ञानिक जटिलताले प्रभाव पारिरहेकै देखिन्छ । नयाँपनको आभास नभएको होइन तर बेरोजगारी, बेथिति र भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिलाई समाधान गर्न सकिएको देखिन्न । नेपालजस्तो देशले पर्यटन र कृषि विकासको रणनीतिलाई बोकेर हिँडे पनि अहिलेलाई काफी छ । तर, यहाँ अझै प्राचीन परम्परामा जसरी नै राजनीतिगत स्वार्थ र खेमाबन्दी हावी छ । देशभित्रै उत्पादन गर्न सम्भव हुने दाल, चामल, मरमसलादेखि ठूला मूल्यका सामग्रीलाई भारतबाट आयात गर्नु परेका विडम्बना छन् । देशका खेतीयोग्य जमिन बाँझै हुन्छन् । ४० प्रतिशत युवाशक्ति भएको हाम्रो मुलुकबाट दैनिक हजारौँ युवा परदेशलाई समृद्ध बनाउन जानैपर्ने बाध्यता छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले मात्रै कर्मशील युवाशक्तिलाई कसरी सन्तुष्टि देओस् । तिनलाई नाना, खाना र छानाको जोहो कसरी गराओस् । बेरोजगारीका दशा र दिनहुँजसो मेनपावरद्वारा चलाखी गरेर कानुनी बनाइँदै ठगिएकाहरूको घरको चुलो कसरी हाँसेर बल्छ ? अब त दिगो विकासको मुहान फुटाउन मुलकमा सबै जनतालाई समान नागरिकको प्रत्याभूति दिने समाजवादउन्मुख समृद्ध नेपालको परिकल्पना हुन सक्नुपर्छ । युवाले स्वदेशमा क्षमताको कदर भएको महसुस गर्ने वातावरण तय गरेर देशले समृद्धिलाई रोजगारसँगै गाँस्नुपर्छ । देश जो–जसको नेतृत्वमा होस्, जनताले निजत्वको भाव बोध गर्ने वातावरण पाउनुपर्छ । सत्तामा हुनेलाई सत्ता बाहिरकाले सघाउने हो भने देशले दसौँ वर्षमा हुने विकासलाई अप्रत्यासित ढाँचाबाट कायापलट गराउन सक्छ ।
विकासका सपनामा सधैँ टालटुले प्रवृत्तिले प्रहार गरिरहन्छ । एकातिर सत्तापक्षले प्रतिपक्षसँगको जुहारी, प्रदेशले संघको कुरोमा अटेर गर्ने, चोक–चोकमा विकासमा लम्कनेभन्दा दुनु सोझ्याउनेको लाम लाग्यो भने आजसम्मको उपलब्धिमा धमिरा लाग्छ । अझ जनताको भीडमा मिसिएर प्रभाव छाँट्ने शैलीमा केही नेतृत्व भुलेको छ । आफ्नै पार्टी, आफ्ना खेमापन्थीलाई काखी च्याप्ने शैलीले राजनीति कलुषित बन्छ । हामीले चुनेका, भोट दिएका नेतृत्वले हारे पनि, जिते पनि राष्ट्रिय स्वार्थको भावनालाई विकसित बनाएर जनतामाझ आउन सक्नुपर्छ । परिवर्तन नै गर्ने हो भने वास्तविक विषयमा कारणसहित अडान लिन पनि जान्नुपर्छ तर सम्भावित समस्यालाई योजना निर्माणपूर्व नै परिकल्पना गर्ने वातावरण तय हुनुपर्छ । मिसन र भिजनसहित काम गर्न नजान्ने शैली अहिलेको समस्या हो । असारे विकासको लहर, स–साना समस्या पनि पार्टी, आफन्तवाद, कतातिर अप्ठेरो पर्ला कि भनेर काखी च्याप्ने सोचले गलतलाई गलत भन्न दिँदैन । न्याय पाउनुपर्ने नै अन्यायमा दबिन्छ । मुलुकको ठूलो समस्या गरिबी, बेथिति र भ्रष्टाचार हो । नेतृत्वमा भने भोगवादी सोच देखिन्छ, सुविधा खोजिन्छ तर भिजन र मिसनमा रहेर ठोस योजनामा हिँड्ने अठोट देखिन्न । योजना बन्छन् तर समयमा सकिँदैन । फलतः त्यहाँ भ्रष्टाचारको जालो बुनिन्छ । संघीय मुलुकले साँचो र चाहेको परिवर्तनलाई विकासका कार्यलाई गरेर देखाउने शैलीबाट पनि त प्रतिस्पर्धा गर्न पनि जान्नुपर्छ । तर, आजसम्म हाम्रो नेतृत्व संसद् भवनमा भत्ता र सत्ताका झत्ता गफ खुब गर्छ । जनताको वास्तविकतासम्म ओर्लेर, बाध्यतासम्मलाई नियालेर समाजवादउन्मुख परिवर्तनलाई जनस्तरसम्म प्रवाहित गराउन सक्दैन । फलतः जनतामा नयाँपन र खुसीको सोचेजस्तो आभास हुन सकेन ।
हाम्रो देश सम्भावना नभएर होइन व्यवस्थापनको स्पष्ट रणनीति र कार्यान्वयनको प्रभावकारी कानुनको अनुशासन नभएरमात्रै आजसम्म विकासको मार्गमा लम्कन नसकेको हो । गुटबन्दी र राजनीतिको कूटनीतिले घेरिएको मस्तिष्कले विकासवादी कूटनीतिलाई अवलम्बन गर्न सक्दैन । परिवर्तनका विषयमा अब प्रत्यालोचना होइन एउटै आवाज बोकेर अघि बढ्न सकेन । अर्को पक्ष ईष्र्या र डाहको मनोविज्ञानमा समृद्धिमा श्रेय उसले बोक्ला भन्ने सोच बोकेर यदि कतैबाट भाँजो हालिन्छ भने त्यो साधक नभएर बाधक नै हुन्छ । सबैको आवाज एउटै भएमा हामीले चाहेको सुसभ्य विकास कसरी सम्भव नहोला र !
हाम्रो देश सम्भावना नभएर होइन व्यवस्थापनको स्पष्ट रणनीति र कार्यान्वयनको प्रभावकारी कानुनको अनुशासन नभएरमात्रै आजसम्म विकासको मार्गमा लम्कन नसकेको हो । गुटबन्दी र राजनीतिको कूटनीतिले घेरिएको मस्तिष्कले विकासवादी कूटनीतिलाई अवलम्बन गर्न सक्दैन । परिवर्तनका विषयमा अब प्रत्यालोचना होइन एउटै आवाज बोकेर अघि बढ्न सकेन । अर्को पक्ष ईष्र्या र डाहको मनोविज्ञानमा समृद्धिमा श्रेय उसले बोक्ला भन्ने सोच बोकेर यदि कतैबाट भाँजो हालिन्छ भने त्यो साधक नभएर बाधक नै हुन्छ । सबैको आवाज एउटै भएमा हामीले चाहेको सुसभ्य विकास कसरी सम्भव नहोला र ! तर, मुलुकमा सुशासनको अनुभूति नभएसम्म अर्को प्रतिक्रान्ति उब्जने भयसँग पनि निर्भय बन्न सकिन्न । विकासका साथमा स्वाभिमान र हाम्रा आत्मपहिचानका पक्षहरू : भाषा, संस्कृति, धरोहर, सकारात्मक परम्परा पनि बाँच्नुपर्छ । विकासका देखावटी नाममा हामीले जति शिक्षित भयौँ त्यति राम्रा राम्रा र वैज्ञानिक संस्कारलाई मार्दै गएका छौँ ।
संक्रमणकालीन संकटले राम्रोसँग पार नपाएका वेदना मुलुकमा छन् । यसर्थ नेपाल र नेपालीको भाग्य र भविष्यलाई सुनिश्चित तुल्याउन सरकारले अब संविधान कार्यान्वयन र लक्ष्यमुखी बन्न स्पष्ट कार्यदिशालाई समात्न सक्नुपर्छ । बरु त ठूला अभिष्ट राखेर पूरा भएन भन्नुभन्दा स–साना योजना बनाएर पूरा गर्दै अघि बढे राम्रो हुन्छ । गाउँमा धारा, पानी, सहकारी, बजार, मल के चाहिन्छ देओस् । भएका स्कुल, स्वास्थ्यचौकीलाई सुधार गरी कमसेकम सुविधासम्पन्न र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाओस् । तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन विकासका योजनामा अब तत्कालीन आवश्यकतामा सरकारले लक्ष्य बनाएर समय सीमासहितको योजना बनाओस् ।
चुनावका बेला हात जोड्दै भोट मागेका सांसद् केन्द्रमै वर्षौँसम्म अल्झिरहन्छन् । स्थानीय समस्यालाई सुल्झाउन गाउँ र सम्बन्धित स्थानसम्म नपुग्ने जनप्रतिनिधिले परिवर्तनलाई आफ्नो क्षेत्रमा जाँदै जाँदैनन् । हरेक सांसद् र मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्र र प्रदेशमा बसेर काम गर्ने अनि प्रतिमहिना वा दुई महिनामा अनिवार्य प्रगति विवरण सुनाउनुपर्ने व्यवस्था अबको सरकारमा हुनुपर्छ । संघीय सरकारले प्रत्येक प्रदेशका पारदर्शी विकासमा आवश्यकताका आधारमा संयोजन र सहयोग गर्दै आवश्यक टेवा मिलाउने हो भने मुलुक बन्न समय लाग्दैन ।
चुनावका बेला हात जोड्दै भोट मागेका सांसद् केन्द्रमै वर्षौँसम्म अल्झिरहन्छन् । स्थानीय समस्यालाई सुल्झाउन गाउँ र सम्बन्धित स्थानसम्म नपुग्ने जनप्रतिनिधिले परिवर्तनलाई आफ्नो क्षेत्रमा जाँदै जाँदैनन् । हरेक सांसद् र मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्र र प्रदेशमा बसेर काम गर्ने अनि प्रतिमहिना वा दुई महिनामा अनिवार्य प्रगति विवरण सुनाउनुपर्ने व्यवस्था अबको सरकारमा हुनुपर्छ । संघीय सरकारले प्रत्येक प्रदेशका पारदर्शी विकासमा आवश्यकताका आधारमा संयोजन र सहयोग गर्दै आवश्यक टेवा मिलाउने हो भने मुलुक बन्न समय लाग्दैन । यहाँ त स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सांसदको मुख ताक्दा, सांसदले संघका ठूलाबडालाई रिझाउँदा हिजोकै शैलीमा भनसुने आफन्तवादे प्रवृत्ति हाबी छ । स्थानीय जनताले सांसदको नाकमुखै देख्न गाह्रो । गाउँका जनप्रतिनिधिहरू यसो गाउँका कामकार्यमा माला र टीका लाएर पट्यारलाग्दो भाषण छाँट्ने शैलीको विकासमा प्रतिस्पर्धा गर्छन् । आफूलाई गाउँमा कुनै कार्यक्रममा सामेल गराएर आसन ग्रहण नगराएको झोँकमा फन्केका नेताहरू मनोवैज्ञानिक आवेग र प्रतिशोधमा हुन्छन् । प्रतिपक्षीको विरोध गर्दै विकासका कनीकुथी विशाल योजनाका गफ मिसाउने शैली पुरानै हो । तर, नयाँपनमा त पहिला विकास अनि सम्मानमा जनताकै साथ मिल्नुपर्छ । यसो भनिरहँदा सबै नेतृत्वमा मिसन, भिजन छैन भन्ने पनि होइन । धेरै परिवर्तन भएका छन् तर जनताले महसुस गर्ने अवस्था छैन । काम गरिएमा नाम र सम्मान मात्र होइन जनताले माया आफैँ गर्छन् ।
संघीय सरकारले प्रादेशिक सरकारलाई विकासका कार्यमा हातेमालो गर्ने हो भने हरेक कामकार्यको आत्ममूल्याङ्कन गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । मूलतः गाँस, बास र कपासको जोहो हुने गरी कमसेकम एक घरमा एक रोजगारमूलक अवसर दिलाओस् । रोजगारले विकासका कार्यमा अत्याधुनिकता देओस् । आधुनिक विकासका आफ्नै मोडल तयार होऊन् जुन महŒवाकांक्षा राखिएका योजनाभन्दा कार्यमूलक होऊन् । प्रायोगिक होऊन् नत्र कल्पना केवल खरानीको डोरी बन्छ । हरेक मानिसका अनिवार्य आवश्यकतामा सरकारले आयव्ययको दिशाचित्र बनाउँदा स्थानीय विकासमा जाँगर बढाओस् । अहिले हिउँदको समयमा विकासको बाटोमा कम्मर कस्नुको साटो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्ने प्राचीन शैलीले नेपालको विकास कछुवा गतिमा हिँड्छ । केन्द्रीय सरकारले प्रदेशबीच कानुनी दायरामा निगरानी राख्ने हो भने अवसर र सुझावका साथमा सचेतना पस्कोस् । अब ठोस योजना र दीर्घकालीक दिगो विकासको पारदर्शी कार्यकलाप आवश्यक हुन्छ । तर, विकासका नाममा संस्कृति र नेपाली समाजको कुनै पनि हदमा विखण्डन हुनु हुँदैन । सुन्दर प्रकृतिलाई केवल दोहन हुनुहुन्न । आवश्यकताका आधारमा प्रयोग र पुनः संरक्षणको बाटो स्पष्ट हुनुपर्छ । वनका वृक्ष र वन्यजन्तुको संरक्षण हुनुपर्छ । कंक्रिट सहरीकरणको शैलीले भोलिको खेतीयोग्य जमिन चितवनमा जसरी, खेतीका लागि उत्तम रहेको तलैया माटो भएको काठमाडौँ सहरमा जसरी कुरूप र हेर्न लायक नरहेको बनिदिन्छ ।
सरकारी प्रशासनको सुस्तताले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारिएर विकासमा मोटो रकमको चेक काटिने परम्पराले लोकतन्त्र आयो भनिएका दशौँ वर्षभन्दा बढीसम्म पनि छोड्नै सकेन । यसो भएरै त भ्रष्टाचारीलाई अवसर मिल्छ । तब जंगलराजको सोचबाट उम्कन नसकेर हाम्रो विचारमा संकुचनको बीउ रोपिइरहन्छ । अब चिर्नु अत्यावश्यक हो । तसर्थ ग्रामीण इलाकाबाट देश निर्माणका सम्भावनालाई नीतिगत आधारबाट केलाएर आर्थिक समृद्धिको मार्गलाई चलायमान तुल्याउनु आवश्यक छ । हिजो नाकाबन्दीमा विकासवादी नवीनताको सोच विकसित भएका प्रगतिशील र सृजनात्मक सोच अहिले शून्य अवस्थामा छन् । आत्मनिर्भर बन्ने कर्मशीलताको कुनै नामनिसाना छैन । स्वावलम्बी बन्ने राष्ट्रियता कुन चराको नाम हो, थाहै छैन । नेता र जनताले त्यतिखेर समृद्धिका नवीन बाटा खोजेका थिए । कतै ग्यासको विकल्प खोजियो, कतै पेट्रोलको विकल्पको विकास भयो भन्ने समाचार चाखलाग्दा लाग्थे ।
हिजोका नाकाबन्दीका कुरा, न्यायालयको चलखेलमा भएका त्रुटि, आफैँभित्रको एकतामा मजबुत बन्न नसकेको दुष्परिणामका बाबजुत अस्थिरतामा अल्झिएका विषय, आईजीपी प्रकरण, आन्तरिक बेमेल, खिचातानीलगायतका विषय पेचिला बने । अस्थिर सरकार भएकाले विकास भएन भन्ने बहाना अब पुरानो पनि भयो । अतः व्यावहारिक परिवर्तनका लागि संघीय सरकारद्वारा शक्ति पृथकीकृत शासनपद्धतिमा देशले मुहार फेर्नु छ । संविधानलाई कार्यान्वयन गरेर मुलुकको लामो संक्रमणकालीन घाउलाई निको तुल्याएर अस्थिर राजनीतिलाई चिर्नु छ । अन्योल, किचलो, हानाथाप, स्वार्थको झगडालाई मेटेर जनता भुल्याउने कर्मलाई तोडेर देशले अग्रगमनको दिशातिर लम्किनु छ । सबै जनताको एउटै अपेक्षा मुलुकको समृद्धि र विकास हो । एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप लगाइनु मात्र भोटलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने पुरानो पद्धति थियो तर यो शक्ति पृथकीकरणले झिना अल्झनलाई चिर्न सक्छ, यो सकारात्मक कार्य हो । अब खेमाबन्दी होइन एकजुट हुने रणनीतिमा राष्ट्रिय स्वार्थले स्थान पाउनुपर्छ ।